China Yakasimba uye kuwanda kabhoni kabhoni yepasi yekugadzira uye Fekitori | Goridhe Bamboo
Yakasimba uye kuwanda kabhoni yakashongedzwa yemapuranga ekunze
Mazhinji mabhodhi eRebo ekugadzira mbichana anovakwa ne1.8m, 2.2m uye 2.5m kana anopfuura urefu (6.1, 7.2, 8.2 tsoka) mabhodhi, uye aya marefu akakurumbira anouya nemutengo wepamberi. Pakati pehurefu uhu, 1.86m ndiyo yakanakisa chiyero kureba uye ndiyo urefu hunoshandiswa zvakanyanya. Uchishandisa mapfupi akareba mabhodhi anogona kukusevhesa inosvika makumi maviri neshanu pasheni.
Zviripachena kuti huni dzinopisa dzaive kunze kwemubvunzo nekuda kwezvisikwa. Chokwadi chinoratidza kuti REBO® Bamboo decking board inosangana nezvose zvinodiwa: Iwo akaiswa mukusimba mukirasi 1 uye vanoshandisa kirasi 4 zvinoenderana ne EN350 / EN335, yakazadzwa nemoto kirasi Bfl-s1 zvinoenderana ne EN 13501-1. Iwo mabhodhi anosangana neEuropean E1 standard, ayo formaldehyde emission mumhepo iri 0.05mg / m3 zvinoenderana EN 717-1. Bamboo akasimba uye akasimba kupfuura huni, izvo zvinoita kuti ive yakanaka yekuvakira nzvimbo dzekunze dzekugara dzakadai sedhongi nemapatio.
Mazhinji mabhodhi eRebo ekugadzira mbichana anovakwa ne1.8m, 2.2m uye 2.5m kana anopfuura urefu (6.1, 7.2, 8.2 tsoka) mabhodhi, uye aya marefu akakurumbira anouya nemutengo wepamberi. Pakati pehurefu uhu, 1.86m ndiyo yakanakisa chiyero kureba uye ndiyo urefu hunoshandiswa zvakanyanya. Uchishandisa mapfupi akareba mabhodhi anogona kukusevhesa inosvika makumi maviri neshanu pasheni. Saka usafunge kuti iyo yakareba ndiyo yakanyanya kunaka. REBO inoratidza kuti iwe utore 1.86m kureba, kunozivikanwa kwazvo munyika yepasirese. REBO yakasarudzika kabhoni uye inopisa yekutsikirira maitiro inogadzira yakakwira gobvu, zvakatipoteredza zvine hushamwari, yakatsiga uye inogara yakasimba. Rurimi uye maburi misoro system inopa nyore nzira yekubatana. Iwo mativi ane grooved anogona kuiswa neasina simbi clip uye inoratidza kutaridzika kwakanaka pasina kuona clip.
Pashure: Kupisa kumanikidza kwakanaka kwemhando yepamusoro inorema bango pasi
Zvadaro: Yakasimba uye yakatwasuka yemishenjere zvinhu zvemadziro efaera pani